Sida looga gudbo baaritaanka laba-laabka ah ee WhatsApp | Androidsis
Waxay umuuqataa wax aan caadi aheyn awooda yeerista ee codsigu leeyahay WhatsApp waa maxay, xitaa a cusboonaysiinta nooca yar, sida loo helay hirgelinta buluugga hubinta taas oo calaamadeysa fariimaha uu horey u aqriyay qofka qaataha ah, waxay ka heli karaan warbaahinta, xitaa noqo a wararka ay soo uruuriyaan telefishanada adduunka. Ma qiyaasi kartaa waxa dhici kara maalinta aan helno cusbooneysiinta iyadoo la filayo hirgelinta wicitaannada codka? Waa waalli dhab ah!
Qormada soo socota, iyadoo laga faa’iideysanayo dhammaan jahwareerka warbaahinta iyo muranka ka dhashay tan cusbooneysiin lama filaan ah in isticmaaleyaal badani ay u maleynayaan inay ku xadgudbeyso asturnaanta iyo xuquuqda dadka. Waxaan rabaa inaan baro laba siyaabood oo fudud oo looga hortegi karo baaritaanka laba-geesoodka ah ee WhatsApp si aysan u ogaanin inaad durba akhrisay fariimaha soo socda.
Kuwaas laba siyaabood oo fudud oo looga hortegi karo baaritaanka laba-geesoodka ah ee WhatsApp Si aysan u ogaanin inaad durba akhrisay fariimaha soo socda, waa loo heli karaa qofkasta isagoon soo dejisanayn nooc kasta oo codsi ah, iyo isagoon xidid iyo wax lamid ah noqon.
Habka ugu horeeya ee aan ku qasbanaan karno inaan iska indhatirno laba-hubinta WhatsApp si aan barnaamijka laftiisa u ogaanin inaan horey u aqrinay farriinta soo socota ee u dhiganta, waa ka eeg daaha ogeysiiska laftiisa laga bilaabo bartayada 'Android terminal', ama ku guuldareysashada taas, si aan sidaas u yeelno adoo kicinaya soo dhaweynta otomaatiga ah ee farriimaha soo socda iyada oo loo marayo goobaha WhatsApp. ogeysiisyada pop-up.
Sidan oo kale, dalabku, ugu yaraan xilligan, ma ogaanayo ama ma awoodo inay aqoonsato aqrinta farriimaha la helay.
Dariiqa labaad ee aan shaqsiyan ugu awooday inaan ku cadeeyo inay shaqeyso, ugu yaraan ilaa iyo waqtiga qorista boostadan, ayaa ah awood u siiso widget-ka WhatsApp-ka dusha desktop-ka Android-ka farriimaha ugu dambeeyay ama ogeysiisyada la helay. Qaabkan, waxaan u aqrin karnaa ogeysiisyada la helay iyadoon la galin arjiga laftiisa sidaasna aan uga gudubno baaritaanka laba-laabka ah ee WhatsApp.
Markaa waxaan heli doonnaa ikhtiyaar saddexaad oo xoogaa culeys badan leh, kaas oo noqon lahaa awood habka diyaaradda, geli arjiga WhatsApp, fiiri waxa aan dooneyno, ka baxno oo aan dib-u-karno isku xirnaanta aaladdayada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Whatsapp » Laba siyaabood oo looga gudbo baaritaanka labada jeer ee WhatsApp si aysan u ogaanin inaad durba akhrisay farriimaha soo socda
Qaabka diyaaraddu ma shaqeyso tan iyo xitaa inta uu ku jiro qaabka diyaaradda, WhatsApp wuxuu kaydiyaa farriinta la akhriyey, iyo markaad dib u hawlgeliso caymiska xitaa iyadoo WhatsApp la xiray, buluugga laba-jeeg ayaa la calaamadeeyay.
Tijaabiyey oo dib loo tijaabiyey xD